Maxaa Ka Jira In Shaaha Bigayska Ahi Adkeeyo Lafaha Jidhka? (DARAASAD) - Daryeel Magazine
Daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday haddii qofku maalintii cabbo saddex koob oo shaah bigayska ah inuu 30% ka badbaadayo xannuunada jajabiya lafaha, marka laga reebo waxyaabaha Ilaahay qadaray ee aan cidna joojin karin.
Khubarada daraasaddan diyaariyey, ayaa tilmaamay in shaahu noqon karo hub lagula dagaalami karo xannuunka jilciya lafaha (Osteoporsis), kuwaasoo keena in lafuhu u nugladaan inay jabaan.
Daraasaddan waxa lagu helay maado kiimikaad oo la yidhaa Falafoniyodh (Flavonoid) oo shaaha bigayska ah ku jirta, taasoo lafaha ka caawisa in ay noqdaan kuwo xooggan oo aan si fudud u jabin amma burbur u keenin marka qofku waayeel noqdo.
Cilmi-baadhistan oo muddo dheer lagu daba jiray waxay tibaaxda in laga yaabo in shaaha bigayska uu ka hortagi karo kansarka iyo xannuunada wadnaha ku dhaca, balse waxa ay ku adkaysteen in ay caddayn u hayaan inuu sidoo kale dhiso, adkeeyana lafaha jidhka.
Daraasadan oo laga qaaday ku dhawaad 1,200 haween ah oo ku jira da’dooda 70aadkii, kuwaasoo toban sanno baadhitaan lagu hayey, qof kastoo ka mid ahna la baadhayey shaaha uu caado u leeyahay inuu cabbo ayaa waxa ka soo baxday in haweenka bigayska cabba aanay lafahoodu burbur keenin amma aanay si fudud u jabin.
Intii lagu gudo jiray muddadaas, haween tiradoodu dhan tahay oo ka mid ah dumarka la baadhay oo kufay, ayaa lafahoodu si fudud u jabeen, kuwaasoo kala badh ka mid ah lafta misigtu jabtay, markii baadhitaan lagu sameeyeyna la ogaaday in aanay shaaha bigayska ah aad u cabbin, halka kuwo cabba lafahoodu awood ahaan iyo qaro ahaanba adkaadaan.
Natiijada cilmi-baadhista ka soo baxday waxa ay iftiimisay in haweenka maalinti cabba 3 koob oo shaaha ay 30% ka badbadaan in lafahoodu si fudud u jabaan, marka loo eego kuwa aan cabin shaaha amma ka yaraysta saddex koob maalintii.
Warbixinta daarasaddu waxa ay sheegtay in koob kastoo haweeenaydu cabto uu 9% ka hortago in lafuhu si fudud u jabaan.
“Waxa jira danayn soo kordhaysa oo ku saabsan doorka cuntada qofku ku leedahay ka hortaga xannuunada keena lafuhu in ay si fudud u jabaan. Waxa jira caddayn sheegaysa in cuntada ay ku badan tahay maadada Fafoniyoodh (Flavonoid), sida khudaarta amma shaaha ay hoos u dhigaan in lafuhu si fudud isaga burburaan,” ayuu yidhi Dr. Jonathan Hodgson oo ka mid ah cilmi-badhayaasha daraasaddan soo saaray.
Sirta Caafimaad Iyo Shaaha Liinta Leh Shaaha Caanaha Leh Waxaa Uu Ilkahaaga Ka Dhigayaa Kuwa Aad U Qurux Badan (DARAASAD CUSUB) Muhiimada Lowsku U Leeyahay Caafimaadka Lafaha Caruurta Maxaad Ka Taqaan Lawska Walnut Iyo Caafimaadka Ku Jira